Tartan Aqooneedka Kediska SBC oo caawa ay ku kulmeen 4 xaafadood Oo adag – SBC
Tartan Aqooneedka Kediska SBC oo caawa ay ku kulmeen 4 xaafadood Oo adag
Caawa waxaa qeybtii hore Fooda isku daray Tartanka xaafadaha kala ah Onkod oo Dangoranyo ah iyo Wadajir oo Garoowe ah.
Waxaa dhexmaray labadaasi xaafadood tartan aqooneed aad u xiisobadan, waxaana ay ugu dambeyntii ku soo dhamaatay oo ayna guushu raacday xaafada WADAJIR GAROOWE iyadoo la timi dhibco dhan 15, halka xaafada Onkod Dangoranyo ay la timo 12 dhibic
Waxaa sidoo kale caawa wada tartarmay labada xaafadood ee kale, oo kala ahaa xaafada Hantiwadaag oo Garoowe ah iyo Xaafada XaafatulCarab Boosaaso.
Labadaasi xaafadood ayaa soo bandhigay tartan xiiso leh, waxaana ugu dambeyntii tartankooda labadaasi xaafadood uu ku soo dhamaaday guushiina ay ku raacday xaafada Hantiwadaag Garoowe iyadoo la timi dhibco dhan 16 halka ay Xaafatul Carab ay la timi 14 Dhibic.
walaalayaal maxaa jira degmooyinka aad sheegaysaan oo aan loo dhamayn .. sababtoo ah magaalooyin badan oo waa wayn baydaan ku soo darin ..sida galdgob oo ah 7 xaafadood .. ahna magaalo madaxda labaad ee gobolka mudug… waa xay sababtaasi aan loogu ogolaan inay ka qaybgasho…. iyadoo dhinac kasta uga qalanta..leh 4 secondary aqoon ahaan…jwb